IMO Messenger ကို - Android အတွက် App ကို Calling Messaging နှင့် Video
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » IMO Messenger ကို - Android အတွက် App ကို Calling အခမဲ့ Messaging နှင့် Video
IMO Messenger ကို - က Android APK ကိုများအတွက် App ကို Calling အခမဲ့ Messaging နှင့် Video
IMO messenger ကို
နေပါစေသူတို့ကအပေါ်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ device ကိုသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အခမဲ့မိသားစုနှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း,! - အရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုနှင့်စကားသံကို Android နှင့် iPhone ပေါ်မှာခေါ်ဆို Make
- * န့်အသတ်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဗီဒီယိုနှင့်စကားသံကိုသင်၏အ 2G, 3G, 4G သို့မဟုတ် Wi-Fi ချိတ်ဆက်ကျော်ခေါ်ဆိုပါစေ
- မိတ်ဆွေများ, မိသားစု, အခန်းဖော်နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူအုပ်စုဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု
- အခမဲ့စတစ်ကာများရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ် Express!
- encrypt လုပ်ထားတဲ့ချက်တင်များနှင့်ခေါ်ဆိုမှု
- အန်းဒရွိုက်တက်ဘလက်များအတွက် Optimized
- ကို SMS နဲ့ဖုန်းခေါ်စွဲချက်တွေကိုရှောင်ပါ * ဒေတာများကိုစွဲချက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတျအဘို့သင့်ပံ့ပိုးပေးဆက်သွယ်ပါ။
အကောင်းအဆိုး cons - IMO Messenger ကို Mobile ဖုန်း
Pros: အ IMO Messenger ကို App ကို၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းစာသားမမက်ဆေ့ခ်ျပို့မှတပါး, အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးအသံနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုထောက်ခံပါတယ်။ သူတို့ကအဖြစ်ကောင်းစွာစတစ်ကာများတစ်လျောက်ပတ်သောစာကြည့်တိုက်ရှိသည်။ အုပ်စုဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအတွက်တစ်ဦးကအတန်ငယ်မကြာသေးမီများအပြင်။ IMO Messenger ကိုကို iOS, Android နှင့် Windows ဖုန်းဖြင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ဂူဂဲလ်အတွက်သန်း5ကျော် downloads, နှင့် 4.3 ratings Store မှာ Play နှင့်အတူ, app ကိုအသုံးပြုသူများအကြားအလွန်ရေပန်းစားသည်။ စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဗေဒတစ်ဦးနှင့်ပေါင်းအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကသာယာအံ့သြစရာ IMO Messenger ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာ Desktop များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ Laptop ကိုပေါ်တူလုပ်နေစရာမလိုဘဲသင့်ရဲ့ Desktop ပေါ်မှာအတွက်တပ်ဆင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အားနည်းချက်များ: အဆိုပါဗားရှင်း 1.2.50 ပါဝင်သည်နိုင်ငံများက၎င်း၏စာရင်းထဲတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအသိအမှတျမထားဘူး။ သို့သော်အမေရိကန်တွေမဆိုပြဿနာမရှိဘဲ app ကို download လုပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာ၏ desktop ကိုဗားရှင်းanice ထိတွေ့နေပါကဤမျှကောင်းသောမိုဘိုင်းဗားရှင်းစေ features တွေအများကြီးကင်းမဲ့။
ကိစ္စရပ်များကို: ပြီးခဲ့သည့်လအနည်းငယ်မှာတော့ Android အသုံးပြုသူများအများဆုံးက Samsung Device များအတွက်, IMO Messenger ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန်မထင်ထားဘူးကြောင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာရံဖန်ရံခါအသံနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ က Android app ကိုကြီးမားတဲ့ထိခိုက်ပေမယ့် iOS ကိုအသုံးပြုသူများစိတ်ပျက်ခဲ့ကြပုံရသည်။ စံပြထက်အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်လျော့နည်းစေသည်သည့် In-app ကို subscription ကိုမော်ဒယ်ရှိပါသည်။ developer များအသံနှင့်ဗီဒီယိုကိုမှတပါးပိုပြီး features တွေထပ်ထည့်ပါကကြီးမြတ်ပါလိမ့်မယ်!
app ကို၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြောင့်ထိုကဲ့သို့ Facebook သို့မဟုတ် WhatsApp ကိုကဲ့သို့သောအခြားချက်တင်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုတောင်းဆို app များနှင့်ဆင်တူသည်။ ဒါဟာ app ကို၎င်း၏ server ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးအကြောင်းကိုဒေတာသိမ်းဆည်းဆိုလိုသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဆာဗာများပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများကယ်တင်ပြုပါအဘယ်သူမျှမကသို့ hacks မှီတိုင်အောင်တဦးတည်းသာလုံခြုံသည်။ သို့သော်သူတို့ကအရပျ၌တင်းကြပ်လုံခြုံရေးအစီအမံများလုပ်ပါ။
သငျသညျဒီ app ကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ apps များ၏ကြီးမားသောလိဂ်ကြောင်းယုံကြည်သေးမဟုတ်ပါဘူးဆိုလျှင်, IMO messenger ကိုအမှန်တကယ်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်အကြောင်းကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ဒီဗီဒီယိုထွက်စစ်ဆေးပါ။
6.16 ကို MB
ဒီဇင်ဘာ 17, 2016
အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆို အခမဲ့ Messaging ကို အခမဲ့ Video Calling မှ IMO Messenger ကို
ဇွန်လ 10, 2019 မှာ 11: 28 နံနက်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2019 မှာ 1: 54 နံနက်
စက်တင်ဘာလ 21, 2018 မှာ 10: 06 ညနေ
မေလ 6, 2018 မှာ 12: 46 ညနေ
အလွန်ကောင်းတဲ့သူတို့ apk များမှာ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2018 မှာ 4: 36 ညနေ
nice chatting app ကို! ဝေစုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
စက်တင်ဘာလ 23, 2017 မှာ 12: 16 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 20, 2017 မှာ 11: 36 နံနက်
အကြှနျုပျ၏ device ကိုဗားရှင်းငါဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အဘယျသို့ apps များ 2.0.1 ဖြစ်ပါသည်
မေလ 29, 2017 မှာ 5: 13 ညနေ
ဒါဟာသမျှအဘို့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်
ဧပြီလ 14, 2017 မှာ 6: 24 ညနေ
ကိုယ့်အားလုံး & msg app ကိုဒီကိရိယာကိုဗီဒီယိုအတွက်မထိုက်မတန်သောအရာမီလီမီတာမူလီ 2.3.5 အတွက် 27 ver Andre ကိုသုံးပါ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2017 မှာ 9: 25 နံနက်
အလွန်ကောင်းတဲ့ app ကို။ ရှယ်ယာများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
jabihullah nuri says:
အောက်တိုဘာလ 18, 2019 မှာ 7: 10 နံနက်
စက်တင်ဘာလ 8, 2016 မှာ 2: 12 နံနက်
ကိုယ့်ငါ ur အကြံပေးမလိုအပ်ငါ၏အ BlackBerry ကအလုပ်မလုပ် pls အပေါ် IMO install
ဇန်နဝါရီလ 28, 2016 မှာ 2: 00 နံနက်
ကိုယ့်လက်ပ်တော့ပ်ထဲမှာတစ်ခု .apk APS ဖွင့်ကိုဘယ်လို ???????
မေလ 17, 2016 မှာ 12: 28 နံနက်
PC အတွက် download, BlueStacks
မတ်လ 12, 2017 မှာ 5: 14 ညနေ
အပြာရောင် Stack ကို Install လုပ်ပြီးသင်လက်ပ်တော့ပေါ်မှာသုံးနိုငျ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 18, 2015 မှာ 12: 14 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 11, 2015 မှာ 3: 21 ညနေ
Syed ဘတ်စ် says:
ဇူလိုင်လ 11, 2015 မှာ 2: 17 နံနက်
ငါ့ကို Imo နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာတစ်ခု facing ။ တကယ်တော့ကိုယ့်ကို Android ဖုန်းပေါ် Imo Messenger ကို install လုပ်ထားကြပါပြီဒါပေမယ့် My Account ကိုမပေးပါ။ ယင်း၏ကြောင့်အခါတိုင်း processing အပေါ်သွားသည်အကောင့်အတွက်သိပ်အချိန်ယူပြီး။ မည်သူမဆိုငါ့ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးနိုင်ပါသည် ... ..
ဒီဇင်ဘာလတွင် 1, 2015 မှာ 4: 12 နံနက်
ငါ၏ချစ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့သင်ကိုဖန်ဆင်းမဟုတ်ပြဿနာနှင့် acct ဖြေရှင်းရန်သို့မဟုတ်ဘာမျှဖြစ်ပျက်အချိန်ကြာမြင့်စွာမှယူချင်လျှင်။ ပထမဦးစွာဒေါင်းလုပ် betternet နှင့် IMO ပါပြီးနောက်၎င်း၏ 100% အကျင့်ကိုကျင့်တို့သည် betternet ချိတ်ဆက်ပါ။
ဇွန်လ 6, 2015 မှာ 8: 26 ညနေ
ကိုယ့် htc (အလိုဆန္ဒက S) အတွက် IMO ကိုမသုံးကြဘူး။ ကူညီပါ
ဇန်နဝါရီလ 2, 2016 မှာ 12: 17 နံနက်
IMO '' installation မှ i707 ... .izz ဖြစ်နိုင် iball ဆလိုက်သုံးပြီးမီတာ
မေလ 9, 2015 မှာ 1: 49 ညနေ
ထို့နောက်သင်သည်သင်၏ IMO acount ok ဖန်တီး
အောက်တိုဘာလ 9, 2018 မှာ 1: 42 ညနေ
Chakraboty, mahi says:
ဧပြီလ 16, 2015 မှာ 6: 02 ညနေ
MD ။ shahariar Pavel says:
ဧပြီလ 10, 2015 မှာ 3: 10 ညနေ
ငါ IMO ကြိုက်တယ်
မတ်လ 7, 2015 မှာ 7: 00 ညနေ
ကိုယ့် PC downloding IMO ကိုကြိုက်ပေမယ့်မပေး
ဇန်နဝါရီလ 29, 2015 မှာ 2: 26 ညနေ
ငါဘာရိန်းအတွက် IMO installed ပါတယ်။ ငါနံပါတ်သုံးပြီးတယ်ဒါပေမယ့် IMO ကအတည်မပြုနိုင်ဘူး။ ငါသည်ငါ့အရေအတွက်အားပေးဖို့ကြိုးစားစဉ်အဆက်သောအခါ, ခိုင်လုံသောအရေအတွက်ကိုရိုက်ထည့်ပါလို့ပြောပါတယ်။ ငါသည်ငါ့သူငယ်ချင်းအကောင့်ကိုဖန်ဆင်းပါတယ်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အလုပ်လုပ်နေကြဘယ်မှာအဖြစ်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုကူညီကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်သလား?
ဇန်နဝါရီလ 11, 2015 မှာ 3: 36 ညနေ
Sharma ritik says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 30, 2014 မှာ 8: 59 ညနေ
ကိုယ့် IMO messenger ကို apk ဖိုင်ကိုချင်နှင့်ငါ့အီးမေးလ်ကိုအိုင်ဒီကပေးပို့
ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2014 မှာ 6: 28 ညနေ
ဒါဟာကျနော်တို့ကိုယခုငါတို့ငါ့နှမလုပ်နေတာနဲ့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဘယျသို့အကြှနျုပျအဘလုပ်နေတာအဘယ်အရာကိုမြင်နိုင်ပါသည်, သူမ၏အခွအေနေကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်တွေ့မြင်နိုင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Country.Now ထဲကအသကျရှငျသောသူသည်ငါတို့အဘို့မယ့်ကြောက်မက်ဘွယ် App ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ App ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Azaan အလီ says:
မတ်လ 29, 2014 မှာ 6: 25 ညနေ
Imo Messenger ကိုဆက်စပ်သောပြဿနာတစ်ခုရင်ဆိုင်နေရ im ။ တကယ်တော့ကိုယ့်ကို Android ဖုန်းပေါ် Imo Messenger ကို install လုပ်ထားကြပါပြီဒါပေမယ့် Imo software ကို My Account ကိုမပေးပါ။ Imo အပေါ်အကောင့်အတွက်နောက်ဆုံးနှစ်ရက်ကနေကြိုးစားနေပေမယ့်အခါတိုင်း processing အပေါ်သွားသည်အကောင့် im အတွက်ယင်း၏ Tales သိပ်အချိန်။ မည်သူမဆိုငါ့ကိုဤပြဿနာများအတွက်ဖြေရှင်းချက်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဇူလိုင်လ 18, 2014 မှာ 1: 02 နံနက်
ချစ်ခင်ရပါသောအလီ, သင်သည်သင်၏ဒေတာဆက်သွယ်မှု check လုပ်ထားပြီလော သငျသညျ EDGE ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါက 3G သို့မဟုတ် HSDPA ကပိုရှည်တဲ့ Lil နည်းနည်းယူတာသေချာပါစေ
တစ်ဦး borromeo norbe says:
သြဂုတ်လ 17, 2014 မှာ 9: 52 နံနက်
Pls ငါ၏အ skype ကသုံးစွဲဖို့ဘယ်လောက်လျှင်ငါ့လမ်းပေးပါ။
အောက်တိုဘာလ 12, 2014 မှာ 8: 57 နံနက်
သင်သည်သင်၏ IMO reinstall, သင်၏အကောင့်ခြင်းမှထပ်ကြိုးစားကြည့်, သင်၏ဖုန်းကသင်၏အချိန်နှင့်ရက်စွဲကို setting ကိုစစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီးသင့်တယ်
ဧပြီလ 5, 2015 မှာ 5: 49 ညနေ
ဦးတပ်ဆင်ရန်နှင့်တက်ကြွသောညစာစား VPN app ကိုသင့်ခေါ်ဆိုမှု Fon အပေါ်ပြီးတော့သင်သည်သင်၏ IMO acount ok ဖန်တီးချစ်လှစွာသော frnd plz frist